﻿ ‘सोचेअनुसार विकास गर्न सकेका छैनौँ’
आजभोली जनताका काममा व्यस्त छु । साथै भर्खरै वर्षाका कारण बाढी आएर धेरै घरहरुमा क्षति पुगेको छ । क्षति भएका घरहरु मर्मत गराउनुका साथै त्यहाँ राहत पु¥याउने काम समेत गर्दैछौं । यस्तै बाटोहरु मर्मत तथा नयाँ बनाउने काम भइरहेको छ ।
वडामा जति विकास भएको छ र जति गर्नुपर्ने थियो त्यो आधारमा म सन्तुष्ट छैन । जति सोचेंको थिएँ, त्यति विकास गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यही पनि विकासका कामलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य छ । पहिलाको तुलनामा धेरै विकास भएको छ । तर यो वडा रामधुनी नगरपालिकाकै सबैभन्दा धेरै बाटोहरु भएको वडा भएकाले अलि बाटोघाटोको विकास गर्न समय लाग्नेछ ।
वडाको विकासको विषयमा तपाईले कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
खासगरि भौतिक पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । बाटोघाटोलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका हौं । त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई विकास गर्न लागिरहेका छौं । यो वडामा धेरै थारु समुदायको बसोबास भएकोले उनीहरुको ग्रामथान बनाउने योजनामा छौं । यहाँका मठ मन्दिरको संरक्षण गर्न लागिपरेका छौं ।
वडाका मुख्य समस्याहरु केके छन् त ?
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बाटोघाटो नै हो । यहाँका सबै बाटोहरु कालोपत्र गरेका छैनन् । अर्को समस्या भनेको यो वडालाई तीनवटा खोलाले छोएको छ । सेउती, बज्राहा र गोजाबेद खोलाहरु धरान सिर भएर बगेर आउँछन् । वर्षाको समयमा यी खोलाहरुले यस वडाहरुमा धेरै क्षति गर्ने गर्छ । ती खोलाहरुको तटबन्धन गर्नु एकदमै जरुरी छ ।
यी खोलाहरुमा आएका बाढीले गर्दा हाम्रो वडामा भएका भौतिक संरचनाहरु तथा पुलपुलेसाहरु एकदमै धरापमा छन् । त्यस्तै यस वडामा सिँचाइको समस्या पनि छ । यो वर्ष मैंले दुई वटा सिचाई आयोजनाहरु माग गरेको छु । यो वडाको रेन्जमा चै चार वटा खानेपानी योजनाहरु छन् । तर पनि यो वडाको धेरै भागहरुमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छैनन् ।
हामीले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लागेका छौं ।
वडाको विकासका लागी कोसँग के आग्रह र माग राख्नुभएको छ ?
खासगरी यो हाम्रो स्थानीय सरकार भएको कारणले गर्दा हामी आफैंले वडाको विकास गर्ने एउटा पाटो भयो । तर हाम्रो क्षमताले वा रामधुनी नगरपालिकामा भएको बजेट र आर्थिक स्रोतले त्यति धेरै विकास गर्न सकिरहेको छैनौं ।
त्यसैले वडाको विकासका लागी हामीले केन्द्रिय सरकार र प्रदेश सरकार सँग माग राखेका छौं । वडाका विकास योजनाहरुमा धेरै पुल डिपिआरहरु बनाएर पठाएका छौं । हाम्रो वडामा सिमसार क्षेत्रहरु अलिक बढी छन् । प्रेम ताल, रासताल जस्ता तालहरु तथा जुडि सिमसार, रानी पोखरी यो वडामा छन् । यिनीहरुलाई संरक्षण गर्ने कुरामा हामी लागि परेका छौं ।
पछिल्लो चरणमा रासताललाई प्रदेशसरकार बाट बजेट विनियोजन भएको कारणले गर्दा अहिले उक्त तालमा सुधार आएको छ ।
के भयो भने वडाको विकास चाँडो हुन्छ होला ?
विकासका लागी मुख्य कुरा भनेकै आर्थिक पक्ष र जनताको सहयोग हो । आर्थिक पक्ष र जनताको सहयोग भयो भने वडाको विकास चाँडो हुन्छ । यो वडामा बजार लाग्ने ठाउँ छैनन् तर पनि रामधुनी नगरपालिकाको सबै भन्दा बढी कर बुझाउने वडा भनेर हाम्रो वडालाई चिनिन्छ । हामीले यहाँका व्यवसायीहरुसँग कर संकलन गरेका छौं ।
अन्त्यमा अहिले वडाले गरिरहेको काममा वडाबासीहरुले अत्यन्त सहयोग र साथ दिनु भएको छ । आगामि दिनहरुमा पनि वडाबासीहरुको यो साथ र सहयोग पाउने आशा छ ।